Amazfit GTS, Amazfit Stratos 3 ary Amazfit X: Famaritana sy vidiny | Androidsis
Xiaomi dia iray amin'ireo marika malaza indrindra eo amin'ny sehatry ny akanjo. Ny marika sinoa dia namela antsika roa volana lasa izay miaraka amin'ny fehin-tànana hetsika vaovao, ny Smartband 4. Fa izy ireo koa dia manana famantaranandro maromaro eo ambanin'ny marika Amazfit. Nivelatra tampoka io faritra io ankehitriny amin'ny famantaranandro vaovao telo, satria efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Amazfit GTS, Amazfit Stratos 3 ary Amazfit X.
Ny marika dia manolo-tena hanavao ny karazana famantaranandrony amin'izao fotoana izao. Avelany miaraka amina maodely mahaliana telo izahay, toy ny Amazfit GTS, Amazfit Stratos 3 ary Amazfit X, izay natao ho an'ny karazana mpampiasa isan-karazany. Na dia mitazona ny mari-pahaizana mahazatra aza ny vidin'ny kalitao izay fantatray amin'ny mpanamboatra.
Satria samy hafa ny tsirairay amin'izy ireo, lazainay aminao bebe kokoa momba azy ireo tsirairay avy. Amin'izany fomba izany no ahafahanao mahafantatra ny zava-drehetra momba ity famantaranandro vaovao avy amin'ny marika sinoa ity. Azonao atao ny mahita ny maodely mifanaraka indrindra amin'izay tadiavinao ankehitriny amin'ity sehatry ny vokatra ity.
4 Vidiny sy fandefasana
Ny famantaranandro voalohany navelan'ny marika sinoa antsika dia ity Amazfit Stratos 3 ity, ny taranaka vaovao amin'ity sokajy malaza ity. Izy io dia famantaranandro natao ho an'ny fanatanjahan-tena. Hita taratra amin'ny endriny ihany koa izany, izay matanjaka, miaraka amin'ny habeny miavaka, nefa mamela antsika hilentika ao anaty 5 ATM, ohatra. Mba ahafahana manao hetsika isan-karazany amin'ny alàlan'ity famantaranandro marika ity.
Manana a Efijery Full Display 1,34-inch, izay hanana fanjifana ambany. Fanampin'izay, miaraka amina sensor sensor bio-track PPG BioTracker. Ny famantaranandro koa dia misy GPS, GLONASS, Beidou sy Galileo ary Bluetooth, izy rehetra ireo dia natao mba hahafahany manararaotra ireo asany maro be. Hikarakara ny fahafahantsika mirakitra ny hetsika ataontsika sy ny fanazaran-tena ataontsika amin'ny fotoana rehetra, afaka mifidy eo amin'ny fanatanjahantena maro samihafa.
Modely iray hafa navelan'i Xiaomi amintsika amin'ity tranga ity ny Amazfit GTS, izay nahazo aingam-panahy avy amin'ny Apple Watch ho an'ny famolavolana azy. Noho izany, avelany amina famantaranandro tsara kokoa isika, miaraka amina endrika maoderina kokoa, izay azontsika ampiasaina isan'andro, tsy amin'ny fanaovana spaoro ihany. Modely marobe marobe kokoa amin'ity lafiny ity ho an'ny mpanjifa.
Ny marika dia nanamafy fa manana an'io maodely io efijery AMOLED iray habe 1,65-inch. Izy io dia miaraka amin'ny rafitra fandrefesana BioTracker PPG, izay ahafahantsika mampiasa azy io rehefa manao fanatanjahan-tena. Ankoatr'izay, manana ny fisoratana anarana karazana fanatanjahan-tena roa ambin'ny folo izy. Etsy ankilany, tonga miaraka amin'ny GPS sy GLONASS hahafahana mifehy ny zotra izay ataontsika miaraka aminy. Izy io koa dia miaraka amin'ny NFC araka ny lazain'ny marika.
Ny bateria amin'ity Amazfit GTS ity dia ho teboka matanjaka iray hafa. Raha ny filazan'ny orinasa ihany, ity famantaranandro ity dia afaka manome fizakan-tena antsika hatramin'ny 14 andro. Noho izany dia ho afaka hampiasa zavatra betsaka ianao amin'ity lafiny ity. Modely somary maoderina sy marobe kokoa.
Fahatelo, avelany miaraka aminay izay maodely mahagaga indrindra, koa noho ny fahasamihafan'ny endriny. Izy io dia manolo-tena amin'ny famolavolana mampidi-doza sy futuristic kokoa amin'ity famantaranandro ity. Saingy azonao atao ny mitia be dia be, indrindra ireo izay maniry zavatra hafa, ity Amazfit X ity dia ho safidy mety.
Ny famantaranandro dia manana habe amin'ny 2,07 santimetatra. Ity modely ity dia vita amin'ny vera 3D miolaka. Amin'ity tranga ity, araka ny hitantsika, ny bokotra dia tafiditra ao ambanin'ny sisiny. Ho fanampin'izany, manana bateria lithium miolikolika afaka manome antsika hatramin'ny 7 andro izy.
Ilay fiambenana manome antsika ny ankamaroan'ny fiasa mahazatra amin'io lafiny io. Ka ho afaka hampiasa azy io amin'ny fanatanjahantena isika, ankoatry ny fampifanarahana azy amin'ny telefaona sy ny fahitana fampandrenesana eo aminy. Tsy misy tsy ampoizina amin'ity tranga ity raha ny fiasa no resahina.
Xiaomi dia nanamafy ny pitsopitsony tena ilaina momba ny fandefasana ireo maodely telo. Hatramin'ny tranga ny roa amin'izy ireo dia efa nanamafy ny vidiny. Raha ho an'ny fahatelo dia tsy maintsy miandry fotoana fohy isika, satria tsy antenaina hivoaka amin'ny 2020 amin'ny fomba ofisialy.
Ny Amazfit Stratos 3 dia hamidy amin'ny vidiny 1299 yuan, izay manodidina ny 163 euro hanovana. Navoaka ihany koa ny kinova manokana mifototra amin'ny Star Wars, izay manana vidiny sahabo ho 213 euro hanovana. Saingy tsy fantatsika raha hivoaka any Espana io na tsia.
Raha ny Amazfit GTS dia 899 yuan ny vidiny, izay eo amin'ny 112 euro eo ho eo no hiova. Etsy ankilany, tsy misy data amin'izao fotoana izao momba ny fandefasana ny Amazfit X eny an-tsena. Satria io maodely io dia tsy hahatratra magazay raha tsy amin'ny taona 2020.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Amazfit GTS, Amazfit Stratos 3 ary Amazfit X: Miambina ilay Xiaomi vaovao